Wakiilka Ousmane Dembele oo ka hadlay mustaqbalka laacibka reer France ee kooxda Barcelona – Gool FM
Wakiilka Ousmane Dembele oo ka hadlay mustaqbalka laacibka reer France ee kooxda Barcelona
Dajiye November 13, 2018
(Barcelona) 13 Nof 2018. Moussa Sissoko ee ah wakiilka laacibka reer France ee Ousmane Dembele ayaa xaqiijiyay inaysan wax saameyn ah ku yeelan doonin eedeymaha uu la kulmayo haatan laacibka reer France.
Wakiilka laacibka reer France ayaa sheegay in xidiga uu dalaalka ka yahay uu sii wadan doono kooxdiisa Barcelona, isla markaana tababare Ernesto Valverde uu doonayo inuu sii joogo safka Blaugrana.
“Dembele wax saameyn ah kuma yeelan doonto dhaleeceenada uu haatan helayo, si wanaagsan ayuu u garanayaa sida loola macaamilo arimahan oo kale, gaar ahaan xili eedeymaha aysan ahayn wax jira”.
“Ma garanayo nooca dhaleeceynta, Ousmane Dembele wuxuu ku sugan yahay kooxda Barcelona, ilaa iyo haatan wuxuu dhaliyay 6 gool wuxuuna caawiyay 2 kale, wax walba ee aan ka fekereyno waa sida loo hagaajin lahaa qaab ciyaareedka 21 jirkan”.
“Shaki kuma jiro in Ousmane Dembele uu sii joogi doono kooxda Barcelona, waxaan hubaa sidoo kale in Ernesto Valverde uu doonayo inuu sii joogo”.
“Waxaan la sheekeestay agaasimaha ciyaaraha kooxda Eric Abidal wuxuuna ku faraxsan yahay joogitaanka Ousmane Dembele, wuxuuna ii sheegay in si fiican uu tababarka u qaadanayo xiligan”.
RASMI: Joe Cole oo gabi ahaan ka fariistay ciyaaraha
Xiddigaha ugu Fiican Premier League ilaa iminka Xilli Ciyaareedkan oo KOOX laga sameeyay....(Yaa kooxdaada kaga jira???)